Faraamjo Iyo R/wasaaraha oo Is Khilaafaya Markii ugu Horreysay+Mooshin Ka dhan Ah kheyre | Xaqiiqonews
Faraamjo Iyo R/wasaaraha oo Is Khilaafaya Markii ugu Horreysay+Mooshin Ka dhan Ah kheyre
Xubno ka tirsan Xildhibaanadii soo doortay Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo, ayaa ka careysan inaanan lagu soo darin Xukuumaddii uu 21-kii bishii March soo dhisay Ra’iisal Wasaare Khayre. Xildhibaanadan waxay doonayan in lagu soo daro Golaha Wasiirada oo la hadalhayo in isku shaandhayn lagu samayn doono billaha ina soo aadan, haddii kalana ay mooshin ka keenayan.
farmaajo ayaa horay u soo gudbiyey liiska qaarka mid ah xildibaanadii isaga soo doortay ee uu rabay in lagu soo daro liiska balse Kheyre ayaa arintaasi iska indha tiray waxaana sii xoogeystay khilaafka ka dhaxeeya labada mas,uul ee ugu sarreysa dowladda khilaafkaasi oo sii hoose ku socday tan iyo markii la magaacabay golaha sawiirada balse waxaa muuqata in hadda uu khilaafka dibadda u soo baxay.
Sidoo kale waxaa jira culeys kale oo Ra’iisal Wasaaraha uu kala kulmayo daraf kale oo Xildhibaan ah, isla-markaana ah kuwii codka siiyay Madaxweynihii hore ee doorashada looga adkaaday, Xasan Sheekh Maxamuud.
Xildhibaanadan oo iyagu soo dhaweeyay magacaabistii Ra’iisal Wasaaraha, ayaa aaminsan inaanu Ra’iisal Wasaaruhu noqon sidii la fillaayay, iyadoo la’ogyahay in si dhow uu ula soo shaqeeyay Madaxweynihii hore ee Somaliya, oo iminka ah Mudane Golaha Shacabka ka tirsan.
Waxaa intaa dheer in Khayre uu dareensan yahay garab kale oo taageersan Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Gudoomiyaha Golaha Shacabka, in ay siyaasadiisa saluugsan yihiin, waxaana la xusuustaa in si xoogan kaga biyo diideen magacaabistii uu soo magacaabay Golihiisii Wasaarada. Khilaafka kala dhaxeeya garabka Jawaari weli waa mid taagan.
Xildhibaanada Labada Aqal ee ka soo jeeda Gobolka Banaadir oo dagaal ugu jira maqaamka gobolkaasi, ayaa Ra’iisal Wasaaraha ku cadaadinaya in uu cadeeyo maqaamka gobolka, haddii kalana ay daadka raacsiin doonaan.
Dadka odoroso siyaasadda Somaliya, ayaa kuu sheegaya in bisha July ay siyaasadda Somaliya geli doonto xaalad cusub, waxaana la isweydiinaya waxa dhici doono Ramadanka ka dib.
Si kastaba ha-ahaatee Farmaajo iyo Khayre oo wada socda, ayaa waxaa hadana muuqata in ay kala socdaan, iyadoona mid kasta ay tiisa cusleysay.